मृत्युपछि पनि आयरल्याण्डमा ठुलो हलचल ल्याउने यी सविता को हुन् ? — Sanchar Kendra
मृत्युपछि पनि आयरल्याण्डमा ठुलो हलचल ल्याउने यी सविता को हुन् ?
आयरल्याण्डमा एउटा मुराल पेन्टिङ यो हप्ता निकै चर्चामा रहेको छ । आयरल्याण्डका नागरिकले त्यो मुराल पेन्टिङलाई पुष्पगुच्छा र शब्दमार्फत सम्मान व्यक्त गरेका छन् । त्यो मुराल आयरल्याण्डमा इतिहासकै एक अविस्मरणीय घटनाको प्रतिक बनेको छ ।
धेरै मतदाताहरुले उनको तस्बिरमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेका छन् भने ‘उनको मृत्युले हामीलाई गर्भपतनको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य बनायो’ जस्ता सहनुभूतिपूर्ण शब्दहरुले सवितालाई सम्झिएको छ । एउटा नोटमा लेखिएको छ, ‘हामी यो परिवर्तन गर्न ढिलो भएकोमा माफी चाहन्छौं तर हामी तपाईँसँगै छौं र तपाईँलाई हामीले बिर्सेका छैनौं ।’